Malaysia: Dumar Qoob Ka Ciyaar Ku Sameeyay Masaajid Hortii Iyo Maamulka Masaajidka Oo Go’aan Ka Soo Saaray – somalilandtoday.com
Malaysia: Dumar Qoob Ka Ciyaar Ku Sameeyay Masaajid Hortii Iyo Maamulka Masaajidka Oo Go’aan Ka Soo Saaray
(SLT-Malaysia) Maamulka masaajid ku yaalla waddanka Malaysia ayaa mamnuucay in dadka dalxiiseyaasha ah ay soo booqdaan, ka dib markii internet-ka lagu shaaciyay muuqaalka labo gabdhood oo qoob ka ciyaar ku sameynaya Masjidka hortiisa.
Gabdhahan oo xidhnaa dhar gaagaaban, jirkoodana uu meelo ka qaawanaa ayaa muuqaal laga duubay iyagoo ku ciyaaraya afaafka hore ee masjidka, oo ku yaalla magaalada Kota Kinabalu ee ka tirsan jasiiradda Borneo.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda dalxiiska ee gobolka Sabah ayaa sheegay in cajaladda la shaaciyay ay muujisay “inaan wax xushmad ah loo muujinin dadka muslimiinta ah ee ku cibaadeysta masjidkaasi”.
Wuxuu sidoo kale sheegay iney arrintaas kala sii hadli doonaan hay’adaha ay khuseyso, si looga hor tago in mar kale ay dhacaan falal noocan ah.
Sannadkii 2015-kii ayay mas’uuliyiinta gobolkaas ku eedeeyeen koox dalxiiseyaal ah iney isku qaawiyeen dusha sare ee buur lagu cibaadeysto, ka dib markii uu dhacay dhulgariir dilay 16 ruux.
Sarkaal maxali ah ayaa ku tilmaamay dhacdadan “mid xushmad daro ah”